Raharaham-pirenena Misoko miadana ny tetezamita vaovao ?
Heverina fa samy miandrandra ny fifidianana ny Malagasy mba tsy hiditra ao anaty krizy vaovao. Lalàna ahafahan’ny fahamarinana milatsaka sy ahafahan’ny ara-dalàna miasa no andrasan’ny vahoaka.
Lany ankehitriny ilay lalàna hifehy ny fifidianana kanefa mitsipaka izany fandaniana izany ireo solombavam-bahoaka mpanohitra no sady malaza ny resaka kolikoly tamin’ny fandaniana azy io. Ahiana araka izany ny tsy filaminana eo amin` ny fiainam-pirenena. Efa miely ny feo ary efa miresaka azy daholo na ny fiarahamonim-pirenena, ny mpanao politika sasany, ny tafika,… fa efa misy miandry hirika hanararaotana ny tsy filaminana misy hananganana tetezamita vaovao mba hanomanana fifidianana milamina sy mangarahara. Araka ny tsiliantsofina re, tetezamita ara-dalàna no apetraka, izany hoe fananganana governemanta hampahomby ny tetezamita ka hanao izay hahatanteraka an-tsakany sy an-davany ny fandaharan’asa nifanarahana fa hotanterahina ao anatin’ny fe-potoana voatondro mialoha. Voafaritra mazava ihany koa ny anjara andraikitra ny tsirairay mandray anjara ao anatiny mba tsy hisian’ny fiovan-kevitra eny antenantenan-dalana. Ao anatin’izany fe-potoana voatondro izany no hanatanterahana fitsapan-kevi-bahoaka mba ahafahana miroso amina fifidianana marina sy mangarahara. Araka izany, ny zavatra tokony ho hita ao anatin’ilay lalàna mifehy ny fifidianana dinihana eny amin’ny antenimieram-pirenena dia tokony hamaly ny fizotry ny fifidianana mba tsy hisian’ny korontana. Misy no mihevitra fa mila fiovam-penitry ny firenena izany hoe rafitra vaovao sy hevitra vaovao kanefa ny fitondrana ankehitriny no tokony hanana fanapahan-kevitra hanova ilay rafitra. Hatrizay mantsy ny olona ihany no vaovao fa ny tonta ihany no havadibadika. Ahiana indray ny hisian’ny korontana ato ho ato.